प्रचण्डको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना, आखिर के भनेका थिए ? – Khabar Patrika Np
प्रचण्डको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना, आखिर के भनेका थिए ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १५, २०७७ समय: १७:४३:५४
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समुका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो अभिव्यक्तिको कारण आलोचित बन्न पुगेका छन् । अहिले उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रचण्डले आफू नेतृत्वको नेकपासहित कांग्रेस र जसपाको सरकार बने भारतलाई समेत कम्फर्टेबल हुने शुक्रवार राति एक अन्तरवार्ताका क्रममा बताएका थिए ।
सो अभि व्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको जनताको पक्षमा नसोचि भारतको पक्षमा सोच्ने काम भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार राति प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै तीन दल मिल्दा भारतका लागि सबैभन्दा राम्रो हुने बताएका थिए । अध्यक्ष दाहालले भारतसँग सम्बन्ध नसुधारी नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नै नहुने तर्क गरेका थिए ।
दाहालले कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लाग्नै नसक्ने ठोकुवा पनि गर्न भ्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा नै सामना गर्ने बताइसकेकाले आफूहरुले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव गरेर उनलाई हटाएर विदा गर्ने दाबी प्रचण्डले गरेका थिए ।